Umshicileli wewebhu we-Geo, kubonakala kulula- iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Umshicileli weGoogle, kubonakala kulula
Geospatial - GISMicrostation-BentleyUkuprinta kokuqala
Ukuphonononga oko ngoku i-Geoweb Umshicileli V8i, kuphawuleka ukuba le mveliso inayo muuuucha ukuziphendukela kwemvelo, nangona ingqiqo igcinwa, kukho utshintsho olukhulu phakathi kweyayiyithuluzi lokuqala le-geo-inginisi ukupapasha idatha yabo kwiimvelaphi kwaye yintoni esi siphakamiso esenzelwe iinjongo zegosati.
I-V8i inguqulo ifikile kum, ndizimisele ukuyihlaziya kodwa ngaphambi kokuba, ndithatha ithuba lokuthetha malunga neenguqu zangaphambili ukuba zingenakwenza ukuba uqhathaniso lunzima kwaye lukhumbule ubuthathaka obukhoyo.
Umshicileli - GeoWeb Umshicileli
Ekuqaleni, uMshicileli wayenzima ukuphumeza i-geofundada, ekubeni yayinomsebenzi omkhulu wokwazi iindawo zokusebenzela ze-Microstation kunye Ilifa lemveli. Yayingenayo iwizard, ingekho imifanekiso yeetemplate, yonke into kwakufuneka yakhiwe ngeenyawo. Ngo-2004 uGeoweb Publisher wakhululwa, owayesele ebandakanya iwizard yokwenza amaphepha anezakhelo ezisisiseko kunye nayo yonke into eyayiyi-cybstryudi kunye noMshicileli (ngezikhonkwane) yayilulwaphulo-mthetho olungaphuculiyo. Ngaphandle koko, kufuneka utyale imali ekuhlengahlengiseni utshintsho.
Ukufika kukaGeoweb Publisher, uBentley wayeka ukuba nenkani malunga neapplet yeJava, eyayifikile kuyo neMicrostation J. I-ActiveX ka-Bentley ebizwa ngokuba yi-vpr yavela, njengesifinyezo kwinto enokwenziwa: jonga, shicilela kwaye ubhale kwakhona.
Le nkonzo ngokwemo imifanekiso kwakungekho ngxaki, ingxaki yayisoloko data umbukeli kumda wesangqa, nangona i data wakhonza nge iis, ukuba ukukhululwa lokuqala efunekayo lofakelo akudala ngaphezu ezithile Java (jre) injini, ukuphunyezwa i AcitveX wavalwa umsebenzi kuphela Internet Explorer, yaye a nga kumenza abaleke okwesihlandlo sokuqala, ukuba unodibaniso olucothayo kunye nomonde encinane (okanye ulwazi kwakusenzeka ntoni kuloo data kugqitywe kwesibindi) yaba
Yonke into eyenziwa yi-vpr yayiyimbonakalo elula ye-dgn, kodwa yayinako ukukhonza phantse nantoni na eyayisenziwa yiJografi kuba ngokwenza oko uMshicileli weGeoweb wayeyiGeographics esebenza kwiseva. Ke umlingo wawukwimimangaliso eyayisenziwa kwiJografi, inokuthi isebenzise uhlalutyo lwazo, kunye novavanyo lwe-quasi-vectorizing kwi-Intanethi kwaye oku kongezwa njengefayile yomgca onxibeleleneyo no-dgn wokuqala. Ngokuqinisekileyo, ngobuthathaka phambi kweXM, awunakukwazi ukwenza izinto ezibonakalayo ngaphandle kokuba zifakwe kwi-PictureScript Scenes (PSS), kwakungekho zimpawu zinamandla, kwaye zaziphakathi. phukile ukusingatha izikali, ngokukwenziwa kwendlela engabonakaliyo kwindlela eqhelekileyo kwaye xa umxholo wawuveliswa kwifayile entsha yembewu yayilahlekile kwisiza ngenxa yezizathu ezingaqhelekanga.
Ifuna izixhobo ezibulalayo ezivela kwiseva, njengoko uMshicileli osebenzela iindlela ezenziwa kwiJografi kwiimfuno zomsebenzisi wayeqondakala. Nangona ndiyavuma ukuba ibincomeka, ukuba sithathela ingqalelo ukuba iphakamise iziqwenga ezingama-25,000 ngendlela yemizuzwana, kwaye nje ukuba uhlaziyekile bekungeyomfuneko kwinqanaba yenza nkulu, ukusuka nje epanini ukuphuma ubukhulu. Ukudityaniswa kwesilumko seProjekthi kukwavumela ulawulo lokuhamba komsebenzi kunye nokunxulumana namaxwebhu angaphandle ngeWebhu yokuKhangela kwiWebhu.
Yonke into yenziwe ngokulandela izikhokelo zeprojekthi yeJografi, enokuthi ibe kwiOracle, SQL okanye Access. Ifestile yokubonisa ifunde iimbombo ezine zombonisi, kwaye yenza uhlalutyo lomhlaba kwifayile ye-Index emva koko yabhekisa kwi-dgn ebhalisiweyo kuloo mbono (okanye ngomphathi wemephu). Umboniso wawungengomfanekiso uqhelekileyo, kuba ii-msliks zaba zii-hyperlink zezinto ezinxulunyaniswe kwindawo yogcino lwedatha kwaye ngale ndlela itafile enxulumene noko inokuboniswa.
Emva koko, ivumelekile ukulungiselela iindidi kunye neempawu kumthi wesikhokelo ukuvula okanye ukucima. Abancinci umbuzo ukhiye iifayile eziguguleyo ezenza imisebenzi eqhelekileyo ye-Microstation: vala okanye uvule izalathisi (amanqanaba), emacaleni Iimephu zenkomba, imifanekiso, cima, usebenzise ii-mdl iinkqubo, ii-macros okanye izicelo ze-vba.
Kodwa kwakungekho migangatho ye-OGC, yayingumsi we-Bentley, kwisitayile sabo. Kwizikhundla ezibini kuphela ezinokubakho: ukurhoxa ukuba umntu onomdla makangene kwimikhono yehempe yakhe okanye eluxolweni ukuba uyindoda enenwele enentshebe ye-GNU, owayesebenza ngaphambili kwi-NASA kwaye ngoku uzinikele ekwenzeni i-GIS.
Ndijonge iGeoweb Publisher v8i, kunye neembeko zam. Ndiyakholelwa ukuba kule Bentley iphucula umbono wayo womsebenzisi oqhelekileyo, ongenaye uWalter Mercado ecaleni kwakhe ukuba achaze ileta yakhe yemihla ngemihla. Kwenze kube lula, kunokuba kunjalo, inyani kukuba ngoku inengqiqo eqondakala ngakumbi ekuhambeni kwezinto ezakhiweyo ziye kwinkonzo.
Kodwa kunokuba alinde ukuphunyezwa lula, amandla lento ayenzayo umdla, njengoko nasekusungulweni DPR likumgangatho ngoku njengokuba IDPR mna ejonge eqaqambileyo phezu ingqiqo database lomhlaba (ukusuka map), apho kunokwenzeka ukudibanisa zombini i-dwg, i-dgn, i-xfm kunye neefayile ze-archaic ezifakwe kwi-database ye-spatial.
Emva koko i-OGC imxhasa inkxaso.
Siza kuyibona kwiintsuku ezizayo.
Bentley Systems Dgn Dwg umbono yam yokuqala